Van Persie Oo Laga Yaabo Inuu Seego Kulanka Argentina
Wednesday July 09, 2014 - 21:32:10 in Ciyaaro by Super Admin
Kabtanka xulka qaranka Netherlands ee Robin Van Persie ayaa laga yaa baa inuu caawa seego kulanka adag ee dhex maridoona Xulalka qaramada Netherlands iyo Argentina.
Kabtanka xulka qaranka Netherlands ee Robin Van Persie ayaa laga yaa baa inuu caawa seego kulanka adag ee dhex maridoona Xulalka qaramada Netherlands iyo Argentina. Kabtanka xulka qaranka Netherlands ee Robin Van Persie ayaa laga yaa baa inuu caawa seego kulanka adag ee dhex maridoona Xulalka qaramada Netherlands iyo Argentina.
Wararka ayaa sheegaya in Van Persie uu la dhibaataysan yahay calool xanuun kaas oo ku kalifi kara Van Gaal inuu ka maqnaado kabtankiisu. Tababaraha Holland Van Gaal ayaa sheegay in Van Persie uu ciyaaridoono haddii uu diyaar u noqdo kulanka afar dhamaadka koobka aduunka.Van Gaal oo ka hadlaya arinta Van Persie ayaa yidhi: “Robin Van Persie wuxuu la dhibaataysan yahay xanuun caloosha ah, manadoonayo inaan halis galiyo”.
“Van Persie wuxuu noo yahay ciyaartoy aad iyo aad muhiim noogu ah, mabda’iyan kabtankaygu markasta wuu ciyaaraa laakiin waa hadii uu 100% taam yahay”.
Netherlands ayaa war fiican ka heshay Nigel de Jong oo la sheegay inuu ku bilaami karo kulanka caawa inkasta oo markii hore lasheegay inuu seegidoono inta ka dhiman koobka aduunka. Van Gaal ayaa sidoo kale ka hadlay arinta De Jong wuxuuna yidhi: “Haddii uu sifiican uga jawaabo oo uu ciyaari karo, markaa waxaa dhaboobaysa mucjisada”.